Free MKV Ntụgharị
> Resource> Free> Top 5 free MKV Ntụgharị
Iji na-ijeụkwụ na evolving emekarị, mkpa ka i nwere na gị onwe gị na desktọọpụ, Laptọọpụ, obere mgbasa ozi ọkpụkpọ, MP3 Player, handheld consoles na ekwentị mkpanaaka. Ka e nwere ọtụtụ video formats chọrọ na-agba ọsọ Ngwa, a video Ntụgharị nwere ike tinye ighikota gị media-ọnyà ndụ.
Enweghị obi abụọ ọ bụla, i nwere nnọọ obere oge jikwaa gị video faịlụ na N'ihi ya, i mkpa n'ezie a bara uru na ebumpụta ụwa video Ntụgharị aka gị video faịlụ. Iji tọghata faịlụ, i nwere ike a lee anya na n'elu 5 MKV Ntụgharị na-gị video collection ọzọ simplified.
Iji mụtakwuo banyere n'elu Ndepụta, na-agụ!
Wondershare Video Converter Free Bụ a ikpuru-na-dobe Ntụgharị maka video faịlụ na-enyere gị iji tọghata ma ọ bụ ọkụ n'ụlọ DVD na site na ọ bụla video usoro. N'adịghị ka ndị ọzọ video converters, Wondershare Video Ntụgharị awade ugboro 30 ngwa ngwa akakabarede ọsọ. Ọ na-enyere mee ka gị na videos vasatail site n'ịtụgharị ha ka ha na-AVI, MKV, DVD, MP4, WMV, SWF, 3GP, MPEG, MP3 ma ọ bụ PSP. E wezụga, ị nwekwara ike ọkụ vidiyo na DVD nchekwa, ISO faịlụ ma ọ bụ DVD discs. Ọzọkwa, ị pụrụ idekọ vidiyo si na Google, Yahoo, YouTube ma ọ bụ ndị ọzọ video-ekere òkè na saịtị.
Sara mbara Format Nkwado
Tọghatara ọtụtụ dị ukwuu nke HD na SD video formats: nkịtị HD video usoro dị HD TS, HD mpg, HD WMV, HD MP4, HD MKV, wdg; na-ewu ewu SD videos dị ka AVI, MP4, MOV, WMV, MKV, mpg, MPEG, H.264 na ndị ọzọ.
Export Audio si MTS Video
Wepụ ọdịyo faịlụ site AVCHD E na-azọpụta ha dị ka MP3, WMA, M4A, WAV, adaka, FLAC, AAC, AC3, MKA, OGG, AIFF, RA, Ram, MPA.
Eme Videos na ọgaranya Dezie Ọrụ
akuku na nwa onu ihuenyo zuru, ewepụtụ achọghị akụkụ, bugharia sideway videos, ma jikota ọtụtụ videos n'ime otu onye, ​​tinye ụfọdụ na-akpali foto ma ọ bụ ederede watermark na-eme ka ọ na ihe pụrụ iche na nkecha.
Freemake Video Ntụgharị (Windows)
Freemake Video Ntụgharị bụ otu n'ime freeware video converters kere site Ellora Onwunwe Corporation. Ị nwere ike iji Freemake Video Ntụgharị iji tọghata video formats, ike foto slideshows, iji anya nke uche music na dọwara video DVD. Nke a video Ntụgharị nwere ike ire kwekọọ n'otú video iyi ka Blu-ray Discs ma ọ bụ DVD iji bulite ha ka ha YouTube.
Freemake n'ezie, ghọrọ usoro dị ka a free omume nke na-enyere video akakabarede na awade onye ọzọ na-akwụ ụgwọ software. Na Freemake Video Ntụgharị, ị nwere ike atọghata video faịlụ na AVI, MKV, DVD, MP4, WMV, SWF, 3GP, MPEG, MP3, PSP nakwa ndị ọzọ dakọtara formats n'ihi na gị Android, iPod, iPhone na wdg
A bụ ihe ọzọ chọọ-mgbe free video Ntụgharị, nchịkọta akụkọ ma ọkpụkpọ maka Windows na Mac. MPEG Streamclip nwere ike igwu ọtụtụ ndị ọzọ video faịlụ ndị ọzọ karịa MPEGs. Nke a video Ntụgharị nwere ike tọghata MPEG faịlụ metụtara muxed ma ọ bụ demuxed formats na ike encode videos ndị ọzọ formats na-agụnye iPod. MPEG Streamclip-enyere gị ibudata vidiyo si na YouTube ma ọ bụ Google dị nnọọ site na itinye peeji si URL.
Mepụtara ebe 2005, MediaCoder bụ a media transcoding software na bụ ewu ewu n'ụwa nile. Ọ na-egosi a zuru okè ngwakọta nke ọnwụ onu ọdịyo na video technology n'ime ihe si-nke-igbe ngwọta nke transcoding. Ọ na atụmatụ a set nke na-eme mgbanwe parameters ka ị nwere ịchịkwa transcoding. MediaCoder bụghị na mfe, ma ọ bụ na-ndị kasị mma mgbe ọ na-abịa ịrụ ọrụ na àgwà.
ClipConverter (Online Ntụgharị)
Clip Ntụgharị bụ otu nke kasị mma ngwa maka online media akakabarede na-enye gị iji tọghata, download ma dekọọ ọ bụla video ma ọ bụ ọdịyo si URL ọ bụla ọzọ formats. Ugbu a, ọrụ na ClipCoverter akwado agụnye Direct Download, Dailymotion na YouTube n'etiti ndị ọzọ. Clip Ntụgharị bụ a free nakwa dị ka ndị kasị ka i nwee ike na-ekiri ihe ndị kasị mmasị YouTube vidiyo na ekwentị mkpanaaka, iPhone, PSP na ọtụtụ ndị ọzọ na ngwaọrụ.
Top 10 undelete Freewares Iji nyere gị aka Naghachi Lost Files